Magiczụta Ime Anwansi Foldable Steam Rinse Strain Basket Strainer Net Kitchen Cooking Tool - Free Mbupu & Enweghị |tụ | WoopShop®
Ngwá Ọrụ Ime Anwansi Na-edozi Ọkpụkpụ Ngwá Ọrụ Net Kitchen Cooking Tool
$ 11.64 Ịgachi price $ 14.94
Ngwá Ọrụ Ime Anwansi Na-edozi Ọkpụkpụ Ngwá Ọrụ Net Kitchen Cooking Tool na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
ụdị: Colanders & Ntinye
atụmatụ: Egwurugwu, Echere
asambodo: CE / EU, CIQ, EEC
Metal Type: Igwe anaghị agba nchara
Model Number: ebe a na-ere kichin
ụdị: Mpelata Steam mkpịsị mmiri
ojiji: Fry Chef Basket Magic Basket
ọrụ: Ngwá Ọrụ Ngwakọta Nkata Basket Strainer
-eji: Ngwá Ọrụ nri Fries nke Fris
atụmatụ: Mgbakwunye kichin dị mkpa na-agbanwe agbanwe
Ọ ozugbo inyeaka kichin mkpa.
Ọ na-amalite dị larịị ma gbasaa na nkata na-agbanwe agbanwe nke ga-ahapụ gị ka esi esi nri, sie ma ọ bụ sie nri dị omimi n'enweghị nsogbu.
Aka ejiri aka emebe nke ọma nọrọ jụụ aka.
Mgbe emechara nri, welie nkata nke isi nri wee si na ite ahụ banye na efere.
Can nwere ike ịsacha nri gị na nkata isi nri, bulie aka elu wee gaa ozugbo site na ebe a na-asa ahụ n'ọdọ mmiri n'otu mmegharị.
Ọ na-adọkpụ ewepụghị maka nchekwa dị mfe ebe ọ bụla.
Ihe: Igwe anaghị agba nchara.
Aka aka: 16.5cm x 12.5cm
Ngwurugwu frized 1 X
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 87714.
dika akowara, ezigbo mma, daalụ